Abrahams - Norwegisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: abrahams (Norwegisch - Burmesisch)
Abrahams sønner var Isak og Ismael.
အာဗြ ဟံသားကား ဣဇာက်နှင့် ဣရှမေလတည်း။
Derfor skal I vite at de som har tro, de er Abrahams barn.
ထာဝရဘုရား၏ကျွန်အာဗြဟံအမျိုး၊ ရွေး ကောက်တော်မူသော ယာကုပ်အနွှယ်တို့၊
အာဗြဟံသား ဣဇာက်၏အဆက်အနွှယ်ဟူ မူကား၊ အာဗြဟံသားကား ဣဇာက်တည်း။
Abrahams levetid og den alder han nådde, var hundre og fem og sytti år.
ထိုနောက်အာဗြဟံသည် အသက်ကြီးရင့်၍၊ အိုမင်းခြင်း၊ နေ့ရက် ကာလပြည့်စုံခြင်းနှင့်တကွ၊ အသက်ပေါင်း တရာခုနစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်၊
ထိုစကားကိုကြားလျှင်၊ အာဗြဟံကျွန်သည် ဦးညွှတ်ချ၍၊ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကွယ်ပြီးမှ၊
ခရစ်တော်နှင့်စပ်ဆင်လျှင်အာဗြဟံ၏ အမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၍၊ ဂတိတော်အတိုင်း အမွေခံ၏ အရာ၌ တည်ကြ၏။
ကျွန်သည် သခင်အာဗြဟံ၏ ပေါင်အောက်၌ လက်ကိုထား၍ ထိုအမှု၌ကျန်ဆိုလေ၏။
အထက်က အာဗြံဟံ၏ မယားစာရာကြောင့် ထာဝရဘုရားသည် အဘိမလက်၏အိမ်သူ၊ မိန်းမ တယောက်မျှ ပဋိသန္ဓေမယူစေခြင်းငှါ စစီရင်တော်မူသတည်း။
သားရှစ်ယောက်တို့ကို၊ အာဗြဟံအစ်ကို နာခေါ် ၏ မယားမိလအခါ ဘွားမြင်လေ၏။ ဗေသွေလကား၊ ရေဗက္ကအဘတည်း။
သို့ဖြစ်၍၊ မိမိနှမရေဗက္ကနှင့် သူ၏အထိန်းကို၎င်း၊ အာဗြဟံကျွန်နှင့် သူ၏လူတို့ကို၎င်း လွှတ်လိုက် ကြ၏။
Dette er Ismaels, Abrahams sønns ættetavle, han som Abraham fikk med egypterkvinnen Hagar, Saras trælkvinne.
စာရာ၏ကျွန်မ၊ အဲဂုတ္တု၊ အမျိုးသား ဟာဂရ ဘွားမြင်သော အာဗြဟံသား ဣရှမေလ၏ သားစဉ် မြေးဆက်တည်းဟူသော၊
အာဗြဟံ သေသောနောက်၊ သားဣဇာက်ကို ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။ ဣဇာက်သည် ဗေရလဟဲရောမြို့မှာ နေသတည်း။
သူတို့သည် ဟေဗြဲလူဖြစ်ကြသလော။ ငါသည်လည်းဖြစ်၏။ သူတို့သည် ဣသရေလလူဖြစ်ကြသလော။ ငါသည်လည်းဖြစ်၏။ သူတို့သည်အာဗြဲဟံ အမျိုးဖြစ်ကြသလော။ ငါသည်လည်းဖြစ်၏။
အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်သော ညီအစ်ကိုမှစ၍ သင်တို့တွင် ဘုရား သခင်ကို ကြောက်ရွံ့သောသူတို့၊ ဤ ကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားစကားကို သင်တို့အား ကြားလိုက်တော်မူ၏။
ယေရှုကလည်း၊ ဤသူသည် အာဗြဟံ၏သားဖြစ်သည်နှင့်အလျောက်၊ ယနေ့ပင် ကယ်တင်တော်မူခြင်း ကျေးဇူးသည် ဤအိမ်အပေါ်မှာ သက်ရောက်လေ၏။
game sheet (Dänisch>Deutsch)picha za x kutombana (Swahili>Englisch)leo (Swahili>Esperanto)belek (Ungarisch>Deutsch)fenton (Deutsch>Französisch)dinasztiából (Ungarisch>Vietnamesisch)gross fixed investments (Englisch>Italienisch)aldrende (Dänisch>Englisch)exe (Thai>Indonesisch)bekas (Malaysisch>Japanisch)kortbedrägerier (Schwedisch>Englisch)fésotérodine (Französisch>Holländisch)палестини (Ukrainisch>Englisch)penuh keimanan (Malaysisch>Chinesisch (Vereinfacht))intranet (Französisch>Ukrainisch)buken (Deutsch>Französisch)sportives (Französisch>Spanisch)מבינים (Hebräisch>Dänisch)sonchifolius (Tschechisch>Englisch)bolezni (Russisch>Spanisch)czar (Englisch>Holländisch)jerantut (Malaysisch>Englisch)单作 (Chinesisch (Vereinfacht)>Englisch)ponovljenom (Kroatisch>Englisch)normalisatiegebieden (Holländisch>Französisch)